Iyo yakasviba nzira yeGoogle hofisi kunyorera pakupedzisira kuwanikwa | IPhone nhau
Vaviri Google neApple havasati vambozivikanwa nekushushikana nazvo gadziridza nekukurumidza mafomu avo kunhau dzakaburitswa neshanduro nyowani dzeanoshanda masystem. Muenzaniso wekupedzisira unowanikwa muGoogle Docs, Google Slides uye Google Sheets kunyorera.
Aya maapplication matatu achangobva kuvandudzwa ku wedzera rima modhi rutsigiro, yakasviba modhi yave ichiwanikwa pane iOS kweanoda kuita makore matatu, paine kuvhurwa kweIOS 3, iyo vhezheni yeIOS iyo yakauya neiyo iPhone X, yekutanga terminal yaApple ine OLED skrini.
Zvinotaridza kuti kubva kuGoogle ivo vaida kumirira Android kuti ishandisewo nzira yakasviba, yerima modhi yakauya kubva paruoko rwe Android 10, rinopfuura rinopfuura gore rapfuura (ivo parizvino vari muApple 11). Nekudaro, aya maapplication haana kuwana rima modhi pane Android kusvika nguva pfupi yadarika.
Kusiyana nezvimwe zvinoshandiswa zvisingatenderi mushandisi kuti aone kuti vanogara vachida kushandisa default mode, Google applications, titendere kuti tishandise iyi modhi otomatiki (zvichibva pane iya inoshandiswa nehurongwa) kana kuzviita nemaoko.
Maitiro ekuvhura pane yakasviba mode Google Docs, Slides uye maSpredishiti
Zvese zvinoshandiswa izvo zviri chikamu cheiyi suite yezvishandiso zvinotibvumidza isu kumisikidza uye kusaita iyo yakasviba modhi kuburikidza neMenu yeMenu.
Mukati meiyo Zvirongwa menyu, isu tinofanirwa kubaya Musoro uye sarudza: mwenje, rima, kana System Default.
Kana isu tikamisa iyi yekupedzisira sarudzo uye isu takagadzirisa yedu iPhone kana iPad kuti iyo yerima theme ishandiswe pane imwe nguva, iko kunyorera kuchazobva pane iyi mode kuratidza mwenje kana rima interface, iyi iri sarudzo yakanakisa muzviitiko zvakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo yakasviba nzira yeGoogle hofisi kunyorera pakupedzisira kuwanikwa
4K vhidhiyo yekutamba inouya kuYouTube